Mampiakatra Ny Feo Ny Fanaovan-Tsonia Boky Tanaty Fahanginana Tao Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Janoary 2013 2:16 GMT
Tsy ela akory izay i Li Chengpeng, bilaogera iray sady tsy mataho-maso mena manao kiana ara-tsosialy, dia namoaka boky iray vaovao: Mahafantatra izao tontolo izao [zh]. Fantatra ihany koa amin'ny maha-mpikabary imasom-bahoaka mahay mandresy lahatra azy, nanao kabary iray sahisahy mikasika ny fahalalahana miteny i Li tamin'ny Novambra lasa teo tao amin'ny anjerimanontolon'i Beijing, sangany ao Shina. Raha kabary hafa no nandrasan'ireo mpanatrika tamin'ilay hetsika fanaovan-tsonia (dédicace) ny bokin'i Li tao an-tanànany ao Chengdu, faritanin'i Sichuan, Shina ny 12 Jan 2013, dia Li tsy niloa-bava sy misaron-tava no hitan'izy ireo. Nosivanina noraràna ny kabariny.
Vao ny alina nialoha ilay hetsika fotsiny, dia nibitsika [zh] ho an'ireo 6,6 tapitrisa mpanjohy azy i Li tao amin'ny Weibo:
方塘方糖[zh]：Maro tamin'ny mpamaky no tonga; maro tamin'ny polisy ihany koa no tonga. Tsy nanam-bintana hiteny mihitsy ilay mpanoratra sy ireo nasainy. Nitondra sarontava mainty i Li ary vonton-dranomaso ny masony. Ny T-shirt nanaovany dia nivaky hoe: “Tiako ianareo rehetra.” Li, miangavy anao tsy hitomany. Mirosoa hatrany!
王金明小伙[zh]: Izao no hetsika fanaovan-tsonia faran'izay nampalahelo sy nampitanondrika indrindra natrehako teo amin'ny fiainako. Feno olona teny an-toerana saingy tsy nandrenesam-peo. Feno polisy niambina ny zoron-trano rehetra. Nitondra sarontava iray i Li ary nanasonia ny bokiny taminà datin'andro diso. Fotoana vitsy monja no nisehoan'ireo nasainy nialoha ny niangaviana azy ireo hiala. Nikoriana teny amin'ny tavan'i Li ny ranomasony.
西藏王洪[zh]: Ny ankamaroan'ireo mpividy ilay boky dia teraka tany amin'ny taona 80 sy 90. Taorian'ny 10 taona mahery nanasàna atidoha azy ireo, angamba mety hanasitrana azy ireo ilay boky.
我叫饭某某[zh]: Tsy navelan-dry zareo hiteny i Li Chengpeng, satria atahoran-dry zareo ho bebe kokoa ny olona hifoha amin'ny torimasony. Kanefa, ny fikorontanan-tsain-dry zareo dia naneho ny hadalàny. Hetsika iray fanaovan-tsonia boky fotsiny anie io e.
酝七[zh]：Fanaovan-tsonia anaty fahanginana, mahatsikaiky re izany. Nahisatr'izy ireo ny fotoana, noraràny ny fitenenana, nendahany ny fanapariaham-peo….kanefa, afaka miteny ny feon'ny fieritreretana. Mahafantatra izao tontolo izao.
Mpisera iray ety anaty aterineto no naneho hevitra [zh] tamim-panesoana tao amin'ny twitter hoe: